Maandooriyo lagu qabtay Gobolka Bari ee Puntland - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Maandooriyo lagu qabtay Gobolka Bari ee Puntland
Maandooriyo lagu qabtay Gobolka Bari ee Puntland
Waxaa maandooriye lagu qabtay deganaka Puntland. Taliyaha Qeybta Booliiska Gobolka Bari G/sare Xuseen Cali Maxamuud, oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo bandhigay khamrigaas, ayaa sheegay in uu ka koobanyahay in ka badan 10,000 oo dhalo, islamarkaana la doonayay in lagu fasahaadiyo shacabka Boosaaso.
Sidoo kale Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Booliiska iyo PMPF oo iskaashanaya, ay khamrigaas ka soo qabteen xaafadaha kala duwan ee Boosaaso, kadib hawlgallo ay ka sameeyeen gudaha magaalada. Khamrigaan ayaa lagu sheegay in uu yahay kii ugu badnaa ee abid la soo geliyo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, balse ay ciidamadu ka hor tageen in bulshada lagu fasahaadiyo.
Previous articleQofkii u horeeeyey oo Kenyaan ah oo u dhintay cudurka CoronaVirus
Next articleCoronavirus: South Africa tally hits 927, Kenya records first death
Puntland oo gacanta ku dhigtay 30 gawaari dagaal oo Kheyre soo iibsaday? Qorshuhu maxuu ahaa?